Suuriya : Labo cadaw isu ahaa oo u saaxiibay cadaw cusub - Haldoornews | Haldoornews
Suuriya : Labo cadaw isu ahaa oo u saaxiibay cadaw cusub
Turkiga guul intee dhan ayaa u soo hayatay?
Axaddi Madaxweyne Erdogan wuxuu sheegay in ciidamadiisa durbadiba qabsadeen 109 kiilo mitir (42 mile oo isku wareeg ah) iyo 21 tuulo oo ka mid ah dhulki aan damacsaneyn inaan qabanno.
Wuxuuna warfidiyeennada u sheegay magaalada muhiimka ee Ras-al-Ceyn ee ku taalla xadka Turkiga oo ay gacanta ku hayeen xoogagga SDF iney gacanta ku dhigeen ciidamada Turkiga dagaalkana la iskala baxay magaalada gudaheed oo bannaanka magaalada uu ka socdo.
Mr Edrogan wuxuu sida oo kale sheegay iney ciidamada Turkiga isku hareeyeen magaalada Tal Abyad, oo jirta masaafa dhan 120 km.
Magaalooyinka Ras al-Ceyn iyo Tal Abyad-na ay ka mid yihiin magaalooyinka ugu muhiimsan uu Turkiga doonayo inuu gacanta ku qabto.
Maxay yihiin waxyeellada dagaalka ka dhashay?
Waxaa isa soo tiraya tirada dadka rayadka ah ee ku dhimanaya deegaannada xadka labada dal ku teedsan sida ay wararku sheegayaan:
In ka badan 50 qof oo rayad ah iyo 100 dabley oo ka tirsan maleeshiyaadka Kurdiyiinta ayaa lagu dilay waqooyiga-bari ee Suuriya sida ay sheegtay SOHR
SDF waxay sheegtay dableyda laga dilay SDF iney yihiin 56 halka uu Turkiga tiradaasi ku sheegay 440
18 qof oo rayad ah ayaa lagu dilay Koonfurta Turkiga, sida ay sheegtay dowladda Turkiga
Turiga waxaa kale oo uu sheegay 4 asakari oo ka tirsan ciidamada turkiga iyo 16 dableey oo ka tirsan maleeshiyaadka suuriya ee xulafada la ah Turkiga
Hay’adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bani aadaminimada ee UN -OCHA waxay sheegtay deegaannada ay dagaalladu k asocdaan iney ka barakaceen dad rayad ah oo ka badan 160,000, iyada oo tiradaasi l afilayo iney sii korodho.
Xaaladda IS waa sidee?
Dagaalka wuxuu ku sii ballaartay xerooyinka lagu haya xubnaha iyo dableyda ka tirsanaa ururka IS.
Axaddina saraakiil ka tirsan xoogagga Kurdiyiinta waxay sheegeen xerada Ceun-Cisa ay ka baxsaden 800 oo qof oo ka mid ah qoysaski iyo qaraabadi dagaallamayaasha ururka isku magacaabay dowladda Islaamiga ee IS.
Halka ay hay’ada xuquuqda aadanaha suuriya u doodda ee SOHR ay sheegtay dadka baxsaday tiradooda iney gaareyso 100.
Xerooyinkaasi oo ay lagu hayo in ka badan 12,000 oo qof o barakacayaal ah oo ay ka mid yihiin 1,000 qof oo dumar iyo carruur ajaanib ah isugu jira oo lala xiriiranaya kooxaha jihaad doonka ah?
SDF waxay gacanta ku hayaan 12,00 oo qof oo looga shakisan yahay iney IS ka tirsanaayeen, iyada 4,000 oo dadkaasi ka mid ahna ay yihiin ajanib.
Turkiguna wuxuu sheegay inuu qaadayo mas’uuliyadda macabiista IS oo uu la kulmo inta uu weerarka wado.